कसरी असफल नहोऊन् त अस्थायी शिक्षकहरु ! - News Today
कसरी असफल नहोऊन् त अस्थायी शिक्षकहरु !
‘जब राज्यले नै फाल्नै पर्छ’ भनि नीति बनाए
in: विचार, समाचार
राज्यले समग्र शिक्षा क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो बाधक अस्थायी शिक्षकहरुलाई मात्र देख्यो । हो बदलिँदो परिवेशमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ जनशक्तिको खाँचो छ र थियो पनि । तर त्यसको व्यवस्थापन केवल अस्थायी शिक्षकहरुलाई बहिर्गमन गराएर मात्र हुन्छ त ? राज्यकै भाषामा भनौ भने पुराना शिक्षकहरु शिक्षा क्षेत्रमा अग्रगमनको बाधक हो रे ! त्यसो भए ति पुराना शिक्षकहरु चाहे अस्थायी हुन् वा स्थायी, उचित सेवा–सुविधा दिएर विदाई गर्नुपथ्र्याे र शिक्षा क्षेत्र सुधारको मार्ग खोल्नु पथ्र्याे । तर…उसले ललिपप पाएर स्थायी भएका पुराना स्थायी शिक्षकहरु, सिन्डिकेट खड़ा गरेका हेडसरहरु, शिक्षा कार्यालय र त्यसका कर्मचारीहरुको
भूमिका, विभाग र त्यसका कर्मचारीहरुको भूमिका तथा विभेदकारी शिक्षा नीतिहरुलाई सुदृढ़ र गुणस्तरीय शिक्षाकालागि दोषी कहिल्यै देखेनन् र देख्ने आँट पनि गरेनन् । आफ्नो आलोचना नहोस र आफूप्रति औंला नठडियोस् भने डरले कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गरी आ–आफ्ना साख बचाउन प्रहार गर्ने एउटै सहज र सरल ठाउँ उसले भेटायो । त्यो थियो अस्थायी शिक्षक, र शुरू भयो ‘एनि हाउ, अस्थायी भगाउ’ जस्ता रणनीतिहरुको कार्यान्वयन। अस्थायी शिक्षकहरुले यहि मूल षड्यन्त्र नबुझेर आज यो दुर्गतिसम्म आईपुगेको अवस्था रहेको छ । सरकारको नियत सफा थियो भने सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नेथियो । आठौं र नवौ संशोधनसम्म आउनु नै पर्दैनथ्यो । नियमावली नै पर्याप्त थियो । नयाँ सहमती र सम्झौताको कुनै आवश्यकता नै थिएन । यदि अस्थायी शिक्षकहरु निजामती कर्मचारीहरु जस्तै एक ढिक्का थिए भने सरकारलाई उसको नीति उनीहरुका विरुद्ध प्रयोग गर्न निक्कै मुश्किल पर्ने निश्चित थियो । यो त तय नै थियो । आफ्ना नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न उसलाई कमजोर कडीकै आवश्यकता थियो । अनि शुरू भयो अस्थायी शिक्षकहरुमाथि जानाजान प्रहार गर्ने रणनीतिहरु ।
१.पहिलो त अस्थायी शिक्षकहरुलाई राजनेताहरुदेखि लिएर तथाकथित बुद्धिजीवीहरुलाई स्मरण रहोस् यी तिनै बुद्धिजीविहरु हुन् जसले परीक्षामा पनि किताब हेरेरै लेख्न दिनुपर्छ भनि सल्लाह दिन भ्याएका थिए । मिडिया जगत लगायतकाले तथानाम अपशब्दहरु प्रयोग गरी मनोबल तोड़ने काम गरियो । यसको उचित प्रतिवाद नत अस्थायी शिक्षकहरुले गर्न सके नत शिक्षकहरुका नाम मा खड़ा भएका संघ, संगठन वा महासंघले नै । उचित अभिभावकत्व पनि पाउन सकेनन् अस्थायीहरुले, हकÞ अधिकारको त कुरै छोड़ौं । अस्थायी शिक्षकहरु २०औं बर्षसम्म सेवा गर्दा अस्थायी रहिरहनुमा उनीहरुको कुनै दोष नै थिएन र छैन पनि ।
२. अर्कोतिर विद्यार्थी जगतलाई पनि खूब उचाल्ने काम भयो । विद्यार्थीहरुको आन्दोलन देखाई अस्थायी शिक्षकको मुद्दालाई निस्तेज पार्ने र छेक्ने काम सकेसम्म गरियो, जसले शिक्षण पेशा प्रति नै नैराश्यताको भाव फैलायो आम अस्थायी शिक्षकहरुका माझ । यहि बहाना देखाई आठौं र नवौं संशोधन आयो जसले आम अस्थायी शिक्षकहरुलाई बहिर्गमन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्यो ।
३. अर्को प्रहार स्वरूप अस्थायी शिक्षकलाई खण्डखण्डमा बाँड्ने काम भयो । गजÞबको कुरा के छ भने अस्थायी शिक्षकहरुबाट पनि उचित अनुचित बिचारै नगरी बिना दूरदर्शिताले यसलाई सहर्ष स्वीकार गरियो । यो ठीक कस्तो थियो भने ‘जस्तै काठकै बिँड भएको एउटा बन्चराले जङ्गलको काठ एक एक गरी काट्दै गर्दा पनि यी बन्चरा आफ्नै त हुन भनि स्विकार गर्नु । अनि कसो बहिर्गमन हुँदैनथ्यो अस्थायीहरुको ?
४. अनि अर्को प्रहार पाठ्यक्रममा भयो । २० बर्ष पुराना शिक्षकहरुलाई नयाँ पाठ्यक्रम दिईयो । कार्यरतको जस्तो प्रश्न पनि दिईएन । बिल्कुलै खुल्ला बिज्ञापनको जस्तो प्रश्न राखियो । पाठ्यक्रम भन्दा बाहिर गएर पनि प्रश्न राखियो । विज्ञान र गणितमा त झन अंग्रेजी र नेपाली दुबैमा प्रश्न राखिनुपर्नेमा अंग्रेजीमा मात्र राखियो । ठिकसँग प्रश्न बुझ्ने अवसरै पनि दिईएन ।
५.अर्को प्रहारको रुपमा परीक्षाको मिति अत्यंत कम समय राखेर तोकियो । विद्यालयमा कोर्स सकिनुपर्ने बेलामा २०–२२ दिनको म्याद राखि परीक्षा दिन लगाईयो । विद्यालयमा काम गर्दै आयोगको जस्तो परीक्षाको तयारी गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण एवम कठिन काम थियो । अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको तैयारी गर्न अवसरै पनि दिईएन ।
७. अर्को प्रहार स्वरुप शिक्षकहरुको छाता सङ्गठनबाट शिक्षकहरुको हकहितको संरक्षण गर्नु भन्दा पनि बहिर्गमन हुने नीतिहरुलाई नै सहयोग तथा पक्षपोषण गर्ने काम गरियो । स्वयं अस्थायी शिक्षकहरुको एक समूहबाट पनि पछिल्लो अस्थायीहरुको आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुको सट्टा विपक्षमा जाने काम गरियो । जसले गर्दा कैंयन अस्थायीहरु जसले अत्यन्त छोटो समय राखेर लिन लागेको परीक्षालाई भ्रम र धोखा भनेका थिए । ती शिक्षकहरु आन्तरिक परीक्षाबाट बञ्चित पनि भए । अखिरमा आयोगले निकालेको आन्तरिकको परिणामले पनि त परीक्षा कति ठूलो भ्रम र धोखा रहेको थियो भनि प्रमाणित पनि भएको छ ।
८.अर्को प्रहार स्वरूप आयोगले निकालेको आंतरिकको नतीजा रहेको छ । शत प्रतिशतका नाममा ५०५ प्रतिशत पनि नतीजा आउन नदिने काम भएको छ । ७५५को नाममा ३७–३८५ शिक्षकहरुलाई मात्र अवसर दिने काम भएको छ । जसले गर्दा हजारौं अस्थायी शिक्षकहरु र उनीहरुका परिवारको अवस्थामा अत्यन्त विचल्ली उत्पन्न भएको छ । रोजगार बिहीन हुने अबस्था सृजना भएको छ । अहिले राजनैतिक सोच, पावर र पहुँचका आधारमा तथा शिक्षकलाई बहिर्गमन गराउन नै आयोगको परिणाम आएको भनि चौतर्फी चर्को बिरोध पनि भईरहेको छ ।
अहिले समग्र अस्थायी शिक्षकहरुको आँखा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशतिर फर्केको छ । सर्वोचले उचित न्याय देला भनि दिलैदेखि आशा गरेका छन् अस्थायी शिक्षकहरुले । सर्वोच्चले सही न्याय गरून, छिटो गरुन् र आम स्थायीहरुको हकहित सुरक्षित होऊन भन्ने हाम्रो पनि हृदयदेखि कामना छ ।
Previous : अस्पतालमा पहिलो पटक अप्रेसन गरेर स्टिल जडान
Next : ईन्जिनियरहरुले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छः प्रदेश प्रमुख कायस्थ